घटक र रगत उत्पादनहरु
सीधा रगत नै प्राप्त छन् भनेर औषधि, रगत उत्पादन भनिन्छ। परिणामस्वरूप अंश एकदम जीन थेरेपी को सीमाहरु विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण - यो सम्भव अर्थपूर्ण प्रभाव जो विशिष्ट रगत र प्लाज्मा घटक, प्रयोग गर्न बनाउन। जटिल कार्य, immunoglobulins (immunologically सक्रिय) र hemostatic: रगत उत्पादनहरु तीन समूह विभाजित भएको हुन्छ।
तयारी जटिल कार्य। प्लाज्मा
जटिल कार्य लागूपदार्थ रक्त प्लाज्मा र albumin समावेश गर्नुहोस्। को प्रभाव - hemodynamic र antishock कार्य दुवै प्रदान। ताजा स्थिर प्लाज्मा पूर्णतया छ सबै सुविधाहरू पनि कायम रहन्छ, त्यसैले यसको प्रयोग सबैभन्दा उपयुक्त छ। ड्राई (स्थिर-सूखे) र तरल (देशी): त्यहाँ प्लाज्मा अन्य प्रकार छन्। विनिर्माण प्रक्रिया चलिरहेको बेला, तिनीहरूले एकदम आफ्नो निको गुणहरू, प्रयोगको रूपमा प्रभावकारी छैन त गुमाउन। ताजा plasmapheresis वा सारा रगत को centrifugation प्राप्त स्थिर, चिसो पहिलो 1-2 घण्टामा एक दाता बाट रगत संग्रह पछि हुन्छ। भण्डारण गरिएका स्थिर रगत तयारी देखि 1 25 डिग्री वा तल को तापमान मा अप एक वर्ष हुन सक्छ। यो अवधिमा सबै भण्डारण प्लाज्मा coagulation कारक, fibrinolysis घटक anticoagulants।
प्लाज्मा रगत सार्ने काम को लागि तयारी
औषधि रगत ताजा स्थिर प्लाज्मा छ। को रगत सार्ने काम सुरु गर्नु अघि, यो दबाइ तयार गर्न आवश्यक छ। प्लाज्मा न्यानो पानी जसको तापमान छैन 37-38 भन्दा बढी डिग्री छ मा thawed थियो। biomaterial संग Plastikatny झोला प्रक्रिया गति आफ्नो हात पसार्नु गर्न सक्नुहुन्छ। अनुसार संलग्न निर्देशनहरू मा, thawed प्लाज्मा अर्को घण्टा भन्दा बढी हालिएको गर्नुपर्छ। तयारी पछि यो fibrin को गुच्छे सक्छ, तर यो फिल्टर संग सुसज्जित छन् रगत सार्ने काम plastikatnye मानक प्रणाली मार्फत यसलाई रोक्दैन।
तपाईं प्लाज्मा खन्याउन सक्दैन भने यसलाई विशाल थक्के, महत्वपूर्ण clouding फेला - दबाइ घटिया छ प्रमाण हो। दोहोरिने चिसो र ताजा स्थिर प्लाज्मा को thawing जोगिन।
मानव रक्त देखि बनेको छ दबाइ धेरै विरामीहरु एक झोला बाट हालिएको गर्नुपर्छ। साथै, प्लाज्मा plastikatny झोला depressurized थियो पछि पछि प्रक्रिया को लागि बायाँ गर्न सकिँदैन। को प्रोटिनको कार्यहरू parenteral प्रशासन गर्न रोगी sensebilizirovan भने, यो ताजा स्थिर रक्त प्लाज्मा खन्याउन काउन्टर छ। रोग प्रतिक्रिया जैविक नमूनाहरू, साथै सम्पूर्ण रगत को रगत सार्ने काम लिन रोक्न।
रगत सार्ने काम
ताजा स्थिर प्लाज्मा, रोगी हालिएको छ, जो AB0 सिस्टम अनुसार, रोगी जस्तै रगत समूह संग एक व्यक्ति देखि लग्नु गर्नुपर्छ। आपतकालीन मा, कुनै odnogruppnoy प्लाज्मा हो भने, निम्न संयोजन अनुमति:
प्लाज्मा: समूह एक (द्वितीय) - रोगी: रक्त समूह0(म)
प्लाज्मा: मा समूह (III) - रोगी: रक्त समूह0(म)
प्लाज्मा: समूह एबी (चतुर्थ) - रोगी: रगत कुनै पनि।
अनुकूलता समूहको लागि परीक्षण बाहिर छैन। रगत उत्पादनहरु (प्लाज्मा आधान) मा संकेत गर्दै:
hemorrhagic diathesis: hemophilia प्रकार एक र बी सहित
आम hemorrhages (25 भन्दा बढी%), मिलेर ठूलो रातो कक्षहरू साथ प्लाज्मा रगत सार्ने काम मा।
सामान्यतया streptokinase वा अन्य fibrinolytic तयारी पृष्ठभूमि मा, रक्त नली को आवर्तक घनास्त्रता संग विरामीहरु उपचार को लागि लागू गरिएको र ताजा स्थिर प्लाज्मा।
यस्तो albumin जस्ता औषधिहरू रगत उत्पादन, रूपमा उपलब्ध छन् एकाग्रता को समाधान 5, 10 र 20%। प्रोटिन साथै, purified albumin साथ प्रयोग गरिन्छ यसरी यो अल्फा र बिटा globulins समावेश गर्दछ। स्थिरिकारी को therein परिचय पछि albumin समाधान pasteurization सामना गर्न सक्छन्। र यो inactivate गर्न भाइरस एचआईवी र hepatitis मद्दत गर्छ। शल्य चिकित्सा, दर्दनाक, बल्न - Albumin आघात को विभिन्न प्रकार मा प्रयोग गरिन्छ। रक्त प्रोटिन संरचना मा विकार कारण जुन जिगर (ascites, cirrhosis, बल्न) मा albumin को एक ठूलो हानि यसको सुनिंनु, प्रशासित। यो एक जीव (हृदयघात, मस्तिष्क edema लागि) मा शुरू तरल को मात्रा सीमित गर्न आवश्यक छ जब एकाग्रचित्त समाधान मा Albumin प्रयोग गरिन्छ।
रक्तचाप को normalization आवश्यक जब रगत तयारी (albumin) को 5% एकाग्रता रगत हानि लागि प्रयोग गरिन्छ। रगत महत्वपूर्ण हानि संग albumin प्रवेश गर्दा रातो कक्षहरूको रगत सार्ने काम संग संयुक्त गर्न आवश्यक छ। बाल albumin मा सबैभन्दा धेरै 10% समाधान रूपमा प्रयोग।
औषधीय रगत उत्पादनहरु - immunoglobulin - प्रतिरक्षाविज्ञानी तयारी एक ठूलो समूह गठन। तिनीहरूले संक्रामक रोगहरु विरुद्ध सक्रिय छन्। नैदानिक व्यवहार मा, सबै भन्दा सामान्यतः गामा globulin प्रयोग। विशिष्ट उत्पादनहरु तिनीहरूले धनुषटंकार बिरुद्ध निर्देशित छन् टिकटिक-सार्ने encephalitis, इन्फ्लूएंजा र अन्य संक्रामक रोगहरु, उच्च चिकित्सकीय प्रभाव छ।
अत्यधिक idiopathic thrombocytopenic purpura को उपचार मा immunoglobulin लागू हुन्छ। यस समूहमा औषध intramuscularly प्रबन्ध छन्। ठूलो प्रभाव उत्पादन शुद्ध immunoglobulins intravenously प्रबन्ध छन्। यो प्रोटिन तुरुन्तै रगत प्रवेश र ऊतक proteases द्वारा पाचन को चरण पार गर्छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
रगत को रोगहरु मा Hemostatic लागूपदार्थ
Hemostatic लागूपदार्थ - एक fibrinogen जटिल cryoprecipitate protrombirovanny। र वन Willebrand कारक, fibrinogen र कारक XIII-fibrinstabiliziruyuschego र अन्य contaminating प्रोटीन - मा बाद ठूलो रकम Antihemophilic globulin (आठ-coagulation कारक अन्यथा) समावेश छन्। मा सुकेको वा स्थिर vials यी लागूपदार्थ प्लास्टिक बैग मा रगत उपचारको लागि उपलब्ध छन्। प्रयोग गरिन्छ वन Willebrand रोग, hemophilia एक र अन्य रक्तस्राव को प्रकार।
यस नवजात, hemophilia बी, anticoagulants को अधिमात्रा को hemorrhagic रोग प्रयोग रगत उत्पादनहरु के के हुन्? यी अवस्थामा protrombirovanny जटिल (CSF वा PPSB) प्रयोग भएको छ। उनको अनुपस्थितिमा मा, ताजा स्थिर प्लाज्मा शुरू।
Fibrinogen आवेदन सीमित स्कोप छ, यो जो fibrinogen कमी को कारण छ आक्रान्त लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ। thrombus सिंड्रोम कारण हो जो अवस्थामा hypofibrinogenaemia, मा, प्रतिस्थापन बेरंग प्रोटिन ताजा स्थिर प्लाज्मा उत्पादन। Purified fibrinogen coagulation गर्न subjected हुन सक्छ प्राकृतिक coagulants संग र रगत मा संतुलन छैन, र यो गुर्दे र पल्मोनरी विफलता बृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। को कमी अप गर्न भने घटक, यो एक प्लाज्मा प्रयोग गर्न राम्रो छ।
Haemostatics topically लागू
बाह्य रक्तस्राव, जो सर्जरी दौडान सक्नुहुन्छ रोक गर्दा - त्यहाँ topically लागू छन् hemostatic एजेन्ट को एक समूह छ हुनत यस्तै रगत उत्पादन, मुख्य रूप intravenously शुरू छन्। यस्तो एजेन्ट समावेश hemostatic स्पन्जले, fibrin फिलिम, thrombin, घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने swab, र अन्य जैविक। मौलिक प्रभाव thrombin छ। यो रक्तस्राव को क्षेत्र मा रक्त नली को lumens thrombosing कि थक्के को गठन हुन्छ। parenchymal अंगहरु मा hemostasis क्षतिग्रस्त सतहहरु लागि धेरै कुशल प्रयोग hemostatics।
Fibrin स्पंज र चलचित्रहरू यसको यांत्रिक गुणहरू धन्यवाद, रक्तस्राव रोक्ने ठाउँको लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ। प्लास्टिक सामाग्री रूपमा, तिनीहरूले शिरापरक अल्सर र बल्न को उपचार मा प्रयोग भएको छ। स्नायुशल्यचिकित्सा fibrin फिल्म advantageously प्रतिस्थापन Dura कमी प्रयोग गरिएको।
माथिको तयारी बाहेक, त्यहाँ stimulatory गुण र antianemic छ कि ती छन्। यी जैव-stimulator "Polibiolin" र "ERIGO" समावेश गर्नुहोस्।
रोग भास्कुलर अवस्था लचीलापन को हानि को अवस्थामा उत्पन्न तिनीहरूले कारण तिनीहरूलाई मा toxins को संग्रह गर्न भंगुर वा compacted हुँदा। माइग्रेन, atherosclerosis जो स्ट्रोक, भास्कुलर dystonia हुन सक्छ: त्यहाँ निम्न रोगहरु छन्। कुनै पनि उमेर मा, रक्त नली को लोच को हानि र रोगी को आफ्नो बाधा निम्न लक्षण अनुभव छ:
स्मृति हानि र मानसिक alertness;
अवसाद, morale को गिरावट को विकास;
बारम्बार चक्कर आना।
पनि कारण भएको जहाजहरू एक इनकार मेरुदण्ड चोट र ग्रीवा osteochondrosis बन्न सक्छ। यस मामला मा, यो मस्तिष्क फीड कि vertebral धमनी क्षतिग्रस्त हुन सक्छ। .. औषध मात्र अस्थायी रूपमा पीडादायी लक्षण राहत: पहिलो तपाईँलाई खोज्न र मेरुदण्ड व्यवहार गर्न, कारण अर्थात् हटाउनु, गर्न, र त्यसपछि जहाजहरु सामना गर्न आवश्यक छ।
रक्त नली लागि औषध
मस्तिष्क को हृदय र रक्त नली को उपचार को लागि तयारी यो सबै कार्य को सिद्धान्त मा निर्भर गर्दछ, भिन्न छन्। सबैलाई आवेदन आफ्नै सीमा छ। लागूऔषधको लोकप्रिय समूह मस्तिष्क वितरण, भास्कुलर dilatation सुधार समाधान हुन मानिन्छ। तीन समूह मा यी लागूपदार्थ विभाजित:
myotropic (चिल्लो मांसपेशीमा relaxes) - "Dibazol", "Eufillin" छ;
neurotropic (स्नायु कक्षहरू मा प्रभाव) - एक "reserpine", "Validol";
nitrates (कार्य दुई सिद्धान्तहरू संयोजन) - "Nitrosorbit", "Nitroglycerin" छ।
को संरचना आधारमा र केही पृथक समूह को प्रभाव छ:
क्याल्सियम ब्लकरहरू। क्याल्सियम आयनों, जो रक्त नली थप नाजुक बनाउन, हार्ड र साँघुरो कारण। यी लागूऔषधको सबैभन्दा मस्तिष्क परिसंचरण सुधार गर्न। हृदय रोग लागू गर्नुपर्छ। क्याल्सियम ब्लकरहरू तीन पुस्ताका मा वर्गीकृत छन्। पहिलो तीन मुख्य घटक (nifedipine, verapamil, diltiazem) मा आधारित छ। दोस्रो पुस्ता लागूपदार्थ गर्न "Klentiazem", "tiapamil", "Nimodipine" छन्। र तेस्रो "Amlodipine" "Norvasc" छ। उत्तरार्द्ध को लाभ तिनीहरूले, कम साइड इफेक्ट भनेर छनौट र लामो समयसम्म हो।
औषधि कारखाना आधारित। मुख्य फाइदा - contraindications र साइड इफेक्ट को एक न्यूनतम। spasms राहत। रगत प्रवाह सुधार।
nicotinic एसिड समावेश तयारी, रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम, पट्टिका गठन जोखिम कम गर्न मद्दत गर्छ। प्रमुख रक्त नली आदर अप्रभावी, सानो capillaries असर गर्छ। तिनीहरूले कलेजो (nicotinic एसिड, "Enduratin") को लागि खराब हो किनभने यी दबाइहरु, केवल उपचार मा निर्धारण लिएको हुनुपर्छ।
हृदय दबाइहरु। यस्तो लागूपदार्थ मस्तिष्क र खाना हृदय समारोह साथ कोरोनरी जहाजहरु पत्र बृद्धि। बेसी, foxglove, adonis को लिली को आधारमा गरे ( "Amrinon", "Kardiovalen", "adonizid")।
रगत विकार को उपचार को लागि अन्य लागूपदार्थको
रगतमा चिनी को तयारी मधुमेह को उपचार मा ठाउँ लिन भाग Kompeks घटनाहरू रूपमा लागूपदार्थ चिकित्सा को एक महत्वपूर्ण घटक हो। सबै मान्छे सही आहार र शारीरिक अभ्यास गर्दै एक सामान्य रगत ग्लूकोज स्तर कायम गर्न सक्षम छन् छैन।
मधुमेह देखि पीडित चिकित्सकको नियुक्ति लागूपदार्थ कम कि रक्त शर्करा लिन छ। lurid विवरण उपचार र सही औषधिको खुराक को पाठ्यक्रम डाक्टर। Hypoglycemic एजेन्ट तीन समूह विभाजित हो:
औषध अग्न्याशय देखि इन्सुलिन सक्रिय छ।
औषध इन्सुलिन संवेदनशीलता वृद्धि।
कार्बोहाइड्रेट को अवशोषण कम कि औषध।
सबै भन्दा लोकप्रिय रक्त शर्करा स्तर मा एक कमी गर्न जान्छ जो अग्न्याशय द्वारा इन्सुलिन को उत्पादन स्तरवृद्धि गर्ने लागूऔषधको पहिलो समूह हो। यी "Amarin", "Manini", "Novonorm", "Diabeton" समावेश गर्नुहोस्। यी औषधिहरू निर्धारित गर्नुपर्छ मात्र डाक्टर। हरेक शरीर फरक छ, मान्छे फरक प्रतिक्रिया। को चिकित्सकीय प्रभाव महसुस छैन केही, रक्त शर्करा नै स्तरमा रहिरहन्छ। यस्तो अवस्थामा, डाक्टर उपचार समीक्षा र अन्य दबाइहरु सल्लाह दिन्छन् वा औषधिको खुराक परिवर्तन गर्नुपर्छ।
रगत लागि फलाम उत्पादनहरु। रगतमा फलाम को कमी सबै Tissues गर्न फोक्सोमा देखि स्थानान्तरण प्रक्रिया erythrocytes अक्सिजन दिन्छ जो हेमोग्लोबिन इच्छित राशि, फारम सक्दैन संग। अक्सिजन अनिकालबाट आउँछ। यो को परिणाम - रक्तअल्पता। रक्तअल्पता उपचार गर्न प्रयोग रगत सुधार कि आधुनिक औषधी, सामान्य hematopoiesis पुनर्स्थापना गर्न सक्षम छ जो फलाम को आवश्यक रकम, आफ्नो संरचना मा समावेश गर्दछ। भोजन संग यस्तो तीव्र प्रभाव हासिल गर्न असम्भव छ। फलाम को औषधि खुराक दैनिक मूल्य Ferrum शरीर 20 पटक सम्भावित Assimilation भन्दा बढी छ। त्यसैले मात्र स्वस्थ खाद्य पदार्थ प्रयोग गरेर चाहेको परिणाम दिन छैन रोग राज्य संग फलाम भर्न प्रयासहरू। हामी विशेष लागूपदार्थ आवश्यक छ।
फलाम सल्फेट लवण को रूप मा संरचना मा उपस्थित जो 1 मतलब, इच्छित मिश्रित को पाचन र अवशोषण सुधार्न सक्ने भिटामिन युक्त। सबै भन्दा लोकप्रिय लागूपदार्थ हो:
गोली "Tardiferron", "Sorbifer durules";
दाना "Ferrofolgamma" "Ferretab" "Fenyuls";
छोराछोरी, सिरप लागि दाना, "Aktiferrin" खस्छ;
एक समाधान मा संयोजन फलाम gluconate, को मैंगनीज र जस्ता - "कुलदेवता";
को चिरपरिचित उपयोगी विनम्रता "Hematogen"।
2. Medicaments जो Ferric फलाम समावेश गर्दछ। एक सुविधा फलाम हीड्राकसीड polimaltozata को रूप मा यस्तो तयारी को प्रयोग हो:
ट्याब्लेटको "Ferrum लेक", "Maltofer", "Biofer";
सिरप समाधान "Fenyuls" "Maltofer" "Ferlatum" थोपा;
intramuscular आचरण "Ferrum लेक", "Maltofer", "Argeferr", "Venofer", "Kosmofer" को लागि समाधान।
इंजेक्शन प्रयोग गरिन्छ रोगी भएको जठरांत्रिय पर्चा रोग छ भने, साना जहाजहरु, साथै शट को घाउ रगत ठूलो हानि संग देखाइएको छ। प्रशासन को नसों मार्ग लागि सम्भव manifestations तयारी thrombophlebitis छन्।
औषधि "Guttalaks"। प्रयोगको लागि निर्देशन
दबाइ 'Likopid'। समीक्षा, अध्ययनहरू
रोगन स्थलहरू को Badyaga: समीक्षा। सिद्धान्त र (फोटो) को आवेदन
औषधि "Polioksidoniy": समीक्षा र प्रयोगको लागि निर्देशन
Karsil। प्रयोगको लागि निर्देशन
Randevu होटल2* (Kranevo, बुल्गेरिया): समीक्षा, वर्णन र समीक्षा
भास्कुलर encephalopathy, आफ्नो उपस्थिति लागि कारण के हो
राष्ट्रवादी - को निदान छ?
ब्वाँसो: कढाई पार सर्किट। विवरण र व्यावहारिक सिफारिसहरू
फुटबलमा नि: शुल्क डिफेंडर - अफिस अतीत
ब्लुटुथ स्पिकरहरू - वरिपरि गतिशीलता
मोटरसाइकल PMZ-एक-750: सिर्जना, संरचना, रूपको इतिहास
Kemer, टर्की पर्यटन